Nbudata MiniTool Power Data Recovery 9.2 – Vessoft
WindowsSystemNkwado & IweghachiteMiniTool Power Data Recovery
Ibe akwukwọ: MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Iweghachite – na mfe iji software maka data mgbake. The software na-enyere naghachi-ehichapụ, mebiri emebi ma ọ bụ furu efu faịlụ na disk partitions nke odida e mere site ná mmetụta nke ihe dị iche iche. MiniTool Power Data Iweghachite na-akwado a ukwuu nke ike draịva na faịlụ na usoro nke ahụ dị iche iche. Nakwa software-enye gị ohere iji weghachi data na ebe nchekwa kaadị, ngwa anya draịva, dijitalụ ngwaọrụ na ozi ndị ọzọ na-ebu. MiniTool Power Data Iweghachite nwere a dị mfe ma kensinammuo interface.
Eweghachi faịlụ na disk partitions
Dị iche iche scann ụdịdị
Data mgbake on dị iche iche data na-ebu
Onye kensinammuo interface
Nbudata MiniTool Power Data Recovery
Obere Wiel MiniTool – onye njikwa ike maka ọrụ zuru oke yana draịvụ ike. Akụrụngwa ahụ setịpụrụ ngwaọrụ maka ọrụ dị mfe na ụdị draịva dị iche iche.
Comments na MiniTool Power Data Recovery
The mmekọ na-agbake na-ehichapụ faịlụ na kọmputa gị na dị iche iche data na-ebu. Ọzọkwa e nwere ọrụ nke data mgbake on ahụ mebiri emebi ma ọ bụ formatted draịva.
Ngwá Ọrụ gosipụta usoro ịrụ ọrụ na chepụta desktọọpụ. The software-enye gị ohere ele ndị dị iche iche na kọmputa ntọala.
Auslogics Registry Cleaner – ikike dị mfe iji kpochapụ usoro ahụ na faịlụ ndị na-enweghị isi ma dozie njehie ndekọ. Akụrụngwa ahụ na-enye gị ohere iji lelee nsogbu niile achọtara na windo nlele zuru ezu.
EziSync – ngwanrọ iji mekota data n’etiti kọmputa gi na ndi ozo. Ọzọkwa, ọ na-akwado nkwado ndabere na sava dị iche iche.
Bandicam – ngwanrọ weghara vidiyo na ihuenyo kọmputa gị. Ọzọkwa, ọ na-akwado ndekọ nke akụkụ ụfọdụ nke ihuenyo ahụ ma mepụta nseta ihuenyo.
Adobe Acrobat Reader – ngwanrọ iji lelee ma bipụta faịlụ PDF nke nwere ngwaọrụ iji tinye ihe ndị kwuru na dọkụmentị ahụ na mmekọrịta ya na nchekwa igwe ojii.
DVD PixPlay – ngwanrọ iji mepụta slideshows ma dekọ nsonaazụ ya na diski. Akụrụngwa gụnyere ngwaọrụ dị iche iche iji hazie usoro okike.